यी चर्चित अभिनेत्रीले आफ्नो प्रेमीको अ'र्कैसँग अ'फे'र रहेको था'हा पा'एर आ'त्मह'त्या गरिन् ! - Filmy News Portal Of Nepal
यी चर्चित अभिनेत्रीले आफ्नो प्रेमीको अ’र्कैसँग अ’फे’र रहेको थाहा पाएर आ’त्मह’त्या गरिन् !
बलिउड की एक अभिनेत्रीले दे’हत्या’ग गरेकी छन् । बलिउड की अभिनेत्री चन्दना गोडाले वि ष खाएर दे’हत्या’ग गरेकी हुन् । २९ वर्षीया चन्दनाले कर्नाटकको बेंगलुरुस्थित आफ्नै घरमा दे’हत्या’ग गरेकी हुन् । प्रेमीबाट धो’का पाएपछि चन्दनाले दे’हत्या’ग गरेको भारतीय प्रहरीले बताएको छ ।
देहत्या’ग गर्नुअघि उनले एउटा भिडियो रेकर्ड गरेकी थिइन् । जसमा उनले प्रेमीमाथि धो’का दिएको आ’रोप लगाएकी छन् । दे’हत्या’ग गर्नु अघि उनले सो भिडियो आफ्ना प्रेमी र परिवारका सदस्यलाई पनि पठाएकी थिइन् । चन्दनाको भिडियो पाए लगत्तै परिवारले अभिनेत्रीका छिमेकीलाई जानकारी दिएर यथार्थ बुझ्न भनेको थियो । चन्दनालाई छिमेकीले अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै चिकित्सकले उनलाई मृ”त घोषित गरे ।
चन्दना दिनेश नामका एक युवकसँग केही वर्षदेखि अफे’यरमा रहेको कुरा बुझिएको छ । प्रेमीसँग विवाहको कुरा निकाल्दा उनका प्रेमी दिनेशले सधैं केही न केही बहा’ना बनाएर टा’र्ने गरेको कुरा पनि उक्त भिडियोमा उनले म”र्नु अघि खुलाएकी छन् ।
दे’हत्या’ग गर्नुअघिको उनको भिडियोमा अभिनेत्री चन्दनाले दिनेशको अर्की महिलासँग पनि अ’फे’यर भएको बताएकी छन् । दिनेशले दिएको धो’का स’हन न’सकेर आफूले ज्या’न दिएको बताएकी छन् । चन्दनाको दे’हत्या’ग पछि उनका प्रेमी फ’रार छन् । – एजेन्सी ।